SERIE A: Torino oo Inter taayarrada ka toogatey + Sawirro – Gool FM
(Milano) 03 Abriil 2016 – Kooxda Inter Milan ayaa garoonkeeda lagu dubtey, iyadoo ay taasi dood ka gelinayso rajadeedii Champions League ka gadaal markii ay 2-1 ku garaacday kooxda Torino, kadib markii 9 nin lagusoo reebay.
Kooxda Nerazzurri ayay guuldarradani usii qaraar tahay maaddaama ay kaalinta 4-aad ka xoogi kartey kooxda Fiorentina oo 1-1 gurigeeda kula noqotay kooxda Sampdoria, markaasoo ay kaalinta 3-aadna rajo wanaagsan ka qabi lahayd.
Yeelkeede, kooxda Inter oo rajo lahayd bilowgii kaddib markii uu gool rigoore ahaa daqiiqaddii 17-aad u dhaliyey Icardi, ayaa waxaa kusoo laba kaclaysay kooxda Torino oo 2 ugu bedeshey, waxaana goolasha ugu qaaraamay Molinaro iyo Belotti oo rigoore ugu labeeyay.
Inter ayaa waxaa uga daran inay rooso ka qaateen laacibiinta muhimka ah ee Miranda 57 (I), Nagatomo 72 (I).
''Waxaan dareemayaa boqor boqor'' - Ciyaar yahan Ingiriis ah oo loo cimaamaday! + Sawirro